Baolina Kitra-Analamanga : Nahazo fitokisana 100% ny mpitantana ny Alfa
L’équipe de la ligue de football d’Analamanga (source Tanalife)
Tonga ary nanome fitokisana ny biraon’ny ligin’Analamanga ho an’ny baolina kitra seksiona 9 (Antananarivo renivohitra, Atsimondrano, Anjozorobe, Ambanitsena, Ankadikely, Sabotsy Namehana, Ambohidratrimo, Atsinanana, Manjakandriana) mamaritra izany ligy izany.
Raha 6 monja tamin’ireo seksiona ireo no nifidy ny mpitantana amin’izao fotoana, dia tafakatra 9 izany teo amin’ny tsangan-tanana ho an’ny fanomezana « quitus ». Tontosa teny Carion tamin’ny sabotsy lasa teo ny fivoriambe fanao isan-taona ho azy ireo. « Isaorako manokana ireo seksiona tonga tany satria ny fiarahana misy eo aminay rehetra no hahitana izay tetika indray hampandrosoana ny baolina kitra eto Analamanga », hoy i Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta, filohan’ny ligy Alfa (Analamanga League Football Association).
Ligy notsipihan’ny filohan’ny federasiona manokana tany Mahajanga nandritra ny tomban’ezaka nataony fa « tena manao ny asany amin’ny tokony ho izy » ny ligin’Analamanga. Saika nandray anjara hatrany rahateo teo amin’ny fifaninanana nokarakarain’ny federasiona izy ireo tamin’iny taona iny. « Hanomboka amin’ny fiandohan’ny volana febroary ny taom-pilalaovana ho an’ny ligy », hoy ihany ity filohan’ny Alfa ity. Isan’ireo fanovana ataon’izy ireo amin’ity fanomanana fifaninanana ho an’ireo mpilalao mpisolo toerana ho an’ireo ekipa diviziona voalohany 10 mandray anjara amin’ny fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’Analamanga.
« Natao izany mba hampiakarana tanteraka ny lentan’ny baolina kitra eto amin’ny ligy misy anay », hoy ihany ity filoha ity.
1.Posté par Mpanaraka baolina le 17/06/2017 16:48 (depuis mobile)
Henjana ny fihinanam-bola ataon''ny filohan''ny ligy analamanga sady tompona lisea iray.Izy no nampiandraiketin''ny FMF ny fampianarana ireo zatovo ao amin''ny sport etude barea academie carion.Tsy aloany ara-potoana anefa ny karaman''ireo mpampianatra.Miampy izay ny familafilana sy teny tsy misy fanajana azon''izy ireo rehefa mba mitaky.Ahiana araka izany ny mety ho voka-panadinana ho an''ireo barea U17 amin''ny bakalorea taona 2017 noho ny afitsok''ity filohan''ny ALFA ity.